सभ्य प्राथमिक शिक्षा - भविष्यमा सफलता प्रमुख
यो फेरि, के प्राथमिक शिक्षा छ को मुद्दा सम्बोधन क्षमता एक सामान्य अध्ययन कौशल बनाउन र फिक्सिंग शायद आवश्यक छ सबै पछि प्रशिक्षण मा बच्चा को सफलता निर्धारण गर्दछ।
1 अवधारणा प्राथमिक शिक्षा
प्राथमिक शिक्षा - शिक्षामा पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो। पछि कसैले कलेज वा विश्वविद्यालयमा आफ्नो अध्ययन जारी राख्न सक्नुहुन्छ, तर यो चरण धेरै कुराहरू निर्भर देखि यो छ मध्य र उच्च विद्यालय हुनेछ। किन? यो बच्चाहरु को जीवन span छ तिनीहरूलाई वरिपरिको विश्व बारेमा आफ्नो पहिलो ज्ञान प्राप्त, साथीहरूको र वयस्क संग कुराकानी विभिन्न आवेदन कार्यहरू समाधान गर्न सिक्न। यो चरण मा यो फारम र बच्चाको पहिचान र चरित्र विकास गर्न थाल्छ।
मा रूसी स्कूल शिक्षा अनिवार्य र सार्वजनिक गर्न उपलब्ध छ। चिकित्सा contraindications बच्चाहरु को अभाव मा, 6.5 वर्ष को उमेर सम्म पुग्ने स्कूल डेस्क मा बस्न। यो अनुसार बच्चा को प्राथमिक शिक्षाको लागि रूसी संघ को व्यवस्था संग मा सुरु हुनेछ भन्ने कुनै पछि तिनीहरूले आठ को उमेर पुग्न ध्यान दिनुहोस् महत्त्वपूर्ण छ।
प्रशिक्षण को प्रारम्भिक चरण आवश्यक मा निम्न वस्तुहरू हो:
हामीलाई वरिपरिको विश्व;
निस्सन्देह, यस्तो पाठ्यक्रम मात्र यदि आवश्यक अवस्था हासिल गर्न सकिन्छ। केही विषयहरुमा प्रशिक्षण छूट विषय हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, दोस्रो ग्रेड देखि, अनुसार संघीय कार्यक्रम संग, बच्चा सुरु गर्नुपर्छ विदेशी भाषा, सिक्ने कम्प्युटर ज्ञान प्राप्त गर्न - र तेस्रो। स्कूल राम्ररी विदेशी भाषाहरूको शिक्षकहरूको संख्या काम गर्दछ भने तर, यो मात्र गरेको र प्राविधिक सुसज्जित कम्प्युटर प्रयोगशाला मा उपलब्ध छ।
निर्देशन को रूसी र गैर-रूसी भाषा संग विद्यालयहरूको लागि: खैर, पढाइ र रूसी भाषा दुई सफ्टवेयर संस्करण उपलब्ध छन्।
2. प्राथमिक शिक्षा: उद्देश्य अपनाए
नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न इच्छा प्रोत्साहन;
गतिविधिहरु को एक किसिम लागू गर्न आवश्यक विशेषज्ञता हासिल;
नैतिक र सौंदर्य भावना रूपमा विकास;
संरक्षण र बच्चाको पहिचान को पदोन्नति;
आफू र तिनीहरूलाई वरिपरिको विश्व दुवैलाई सकारात्मक मनोवृत्ति को गठन;
शिक्षालाई चासो बढाउने;
बाल स्वास्थ्य सुधार (शारीरिक र मानसिक);
मात्र एक बच्चाको व्यक्तित्व को गठन, तर पनि आफ्नो रचनात्मक क्षमता।
3. प्रारम्भिक प्रशिक्षण: संगठनको सिद्धान्त
प्राथमिक विद्यालयमा स्कूल वर्षमा सबै विषयहरू सामान्यतया नै शिक्षक द्वारा बाहिर छन्। मात्र अपवाद कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत (वा chorus) र एक विदेशी भाषा जस्तै विशिष्ट पाठ हो।
पहिलो वर्ग मा बच्चाहरु मात्र सकारात्मक मूल्यांकन राख्न अनुमति ( "राम्रो" वा "उत्कृष्ट", क्रमशः, "4" र "5")। , नीलो हरियो र रातो: साथै, अब एकदम अक्सर तथाकथित हास्य मुद्रण द्वारा तीन रंग मा अभ्यास। तिनीहरूले "इनाम" प्रयास र सन्तोषजनक प्रदर्शन लागि विद्यार्थी।
तर पछि दोस्रो ग्रेड, बच्चा प्राप्त एक चौथाई लागि र वर्षको लागि मूल्यांकन सहित सहित सबै मूल्यांकन छ। यो एक डायरी को अनिवार्य उपस्थिति हुन जान्छ, तर स्कूल वर्ष को अन्त मा प्रत्येक फरक आकलनीय पत्र हस्तान्तरण वा तपाईं टिप्पणीहरू धन्यवाद।
प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी देखि स्नातक पछि consciously कि वर्णन वरपरको वस्तुहरु पालन र तिनीहरूलाई चिनारी गर्न सक्षम हुनुपर्छ। साथै, त्यहाँ समानता र मतभेद को एक नम्बर, साथै एक साधारण सुविधा को संघ, सारा फरक भाग पहिचान, धेरै वस्तुहरू, वा वस्तुहरू को तुलना संग कुनै समस्या हुनुपर्छ।
लगनशील विद्यार्थी पनि सबै भन्दा सरल नाप्ने उपकरणहरू ह्यान्डल गर्न सक्षम छ, र मापन डेटा पछि आवश्यक सम्बन्धमा समस्या निर्माण र समाधान गर्न प्रयोग।
साथै, विद्यार्थी सामान्यतया सुधार गर्न र एउटा काल्पनिक अवस्थामा भूमिका खेल्न रचनात्मक समस्या समाधान गर्न कार्य योजना आकर्षित अप, सक्षम छ।
सिद्धान्त, हामी सुरक्षित निम्न उच्च वा भनेर भन्न सकिन्छ माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा यो चरण मा आकार लिन थाल्छ।
यो स्कूलमा कसरी संगठित हुनुपर्छ श्रम सुरक्षा?
बिक्री को प्रभावकारी तरिकाहरू
को जेब्रा "मडागास्कर" र कार्टून को अन्य मुख्य वर्ण को नाम के हो?
को किन Baty नोभगोरोड छैन गयौ धेरै संस्करण
भोक को स्थिर भावना कसरी पिट्न?
यस चिकित्सक लागि केक: डिजाइन विचार